Luis Enrique Oo Saadaal ka bixiyey ciyaarta Clasico
HomeWararka MaantaLuis Enrique Oo Saadaal ka bixiyey ciyaarta Clasico
Tababaraha kooxda ayaa ka hadlay ciyaarta dhex mari doonta Real Madrid ee Clasico maalinta Axadda.
Enrique oo la weydiiyey in kooxdiisu u dhow dahay in ay ku guuleysato ciyaarta Clasico ayaa waxa uu ku jawaabay in ay tahay ciyaar furan oo aan midkoodna loo saadaalin karin in ay guuleysanayso, balse marka ay ciyaartu dhamaato uun natiijada la ogaan doono.
“Cidina ma odhan karto sidaas ayay wax noqonayaan. Haddii aan ka sii hor-dhaco, waa khatar. Waxa aanu ku ciyaaraynaa garoonkayaga taasina faa’iido ayay noo tahay, laakiin marka la eego dhinacyo badan, taasi waxba ma tarayso. Haddii aan idhaahdo kooxdaas ayaa guuleysan doontana waa halis saamayn nagu yeelan doonta.” Sidaas ayuu yidhi Enrique.
Tababaraha Barcelona, Luis Enrique oo la weydiiyey in kooxdiisu ay Axadda ay soo bandhigi doonto ciyaartii ay Arbacadii la ciyaartay Manchester City oo kale, waxa uu sheegay in aanu garan karaynin sida ay Axadda wax u dhici doonaan.
Manchester City vs Liverpool 5-0 – EPL 2016/2017 – Full Highlights
10/09/2017 Diiriye Ahmed
Highlights: New York Yankees vs Houston Astros – ALCS